Sida loo qabsaday iyo aad ugu qortid iPhone Screen
> Resource > iPhone > Ciidamada iyo aad ugu qortid iPhone Screen
Qabsaday iyo aad ugu qortid iPhone Screen
Haddii aad qabto iPhone ah oo aad rabto inaad la wadaagto shaashadda aad kombuutarka, gaar ahaan duubo shaashadda ujeedada. Tusaale ahaan, aad rabto in aad dadka tuso tutorial ah sida loo video ku saabsan barnaamijyadooda iPhone, halkan waa xal siman in ay xakamayso iPhone hoos Windows. Just raac tilmaan-in la sameeyo shaashadda qabashada iPhone.
Veency: VNC Server u iPhone
DemoCreator: taariikhqorihii Screen for Windows
iyo in la hubiyo in aad iPhone ayaa jailbroken.
Sidee si ay u qoraan screen iPhone
1 Download iyo rakibi Veency aad iPhone
2 Download iyo macmiilka VNC rakibi
Download iyo rakibi VNC macmiilka (qaataan TightVNC sida tusaale ahaan) aad kombuutarka.
3 Run VNC siladda iyo sida socda sameeyo
Run VNC siladda oo aad weydiin doonaa khaanada aad cinwaanka iPhone IP in Waxaad ka heli kartaa in Settings -.> WiFi. Riix icon ku saabsan soo xulay WiFi Network in uu soo bandhigo Ciwaanka IP: ga ah. Leave goobaha kale ee sida default oo guji Connect.
Markaas dib si aad u iPhone oo waxaad arki doontaa codsi fog gacanta ka macmiilka VNC. Riix aqbal oo waxaa jiri doona icon a xiriir VNC ee dhinaca kore ee midig ee shaashada iPhone.
Haddaba waad arki kartaa shaashadda iPhone on your computer. Waxaa jiri doona a mouse yar dalwaddii oo aad xakamayn kartid iPhone aad mouse fog. Halkan waxaa ku kontaroolada:
Click Left: screen taabto, oo haysta badhanka halka guuraya waa sida afganbigii.
Click Dhexe: button qufulka
Right click: button menu
Keyboard, keyboard, si aad u samayn kartaa qoraalka makiinada dhaqso leh aad keyboard marka la barbar dhigo xiriiri-makiinada.
3 Download iyo orod DemoCreator
Open iPhone screen taariikhqorihii DemoCreator , iyo dooran Codsiga iyo soo qaado macmiilka VNC in menu jiido-hoos. Riix Next iyo waxaad arki doontaa 3-2-1 tirec inuu ku soo bilowdo diiwaan aad screen on iPhone.
F10 Press marka aad dhameystiran si ay u qoraan screen on iphone. Waxaad ku eegaan kartaa video, waxa ay xaalkaa la dhisay-in video editor ama u wargeeyaan sida video wax soo saarka iyo la wadaagto waxa on YouTube ama blog.
Talooyin ku saabsan screen qabashada iPhone
Tan iyo markii la wadaago screen fog ay ku xiran tahay WiFi oo aan u baahnayn cable kasta, heerka jir ah video ay ku saabsan tahay 15 FPS, sidaas awgeed waa qayb yar oo adag si ay u qoraan kulan. Haddii aad rabto in aad si ay u qoraan screencast oo ku saabsan sida loo isticmaalo barnaamijyadooda ama hawlaha kale ee onscreen oo u baahan yar FPS, Veency daray DemoCreator noqon doonaa doorasho hufan.
Hadda, aad uma uu diyaarin karaa password wax VNC on Veency. Iyo in gab Veency, aad gab kaliya karaa WiFi ama kaliya uninstall barnaamijka.
Sida loo Beddelaan PowerPoint (PPT) si MPEG Video
Sida loo qabsaday Videos ka Screen
Sida loo hagaagsan playlist si iPhone aan Lugood
3 Apps si hagaagsan iPhone Xiriir
HABAB LAGA HELO Wi-FIPASSWORD
3 Hababka si ay u gudbiyaan Notes ka iPhone in PC / iCloud
Sida loo soo dejinta Xiriirada ka iPhone si Mac
4 Siyaabaha Bedelka iPhone Camera Roll in PC / Mac
Sida loo dhoofiyo Notes ka iPhone, iPad iyo iPod xiriiri in Computer
Sida loo saar Wallpapers on iPhone? | Wallpaper u iPhone 4s